Madaxweyne Lafta Gareen oo war ka soo saaray qaraxii Kismaayo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweyne Lafta Gareen oo war ka soo saaray qaraxii Kismaayo
Madaxweyne Lafta Gareen oo war ka soo saaray qaraxii Kismaayo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku naf waayey qarixii argagixisanimo ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
Madaxweyne Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa si gaar ah ugu tacsiyeeyey Ganacsatada Soomaaliyeed geerida Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha Jubbaland, Alle ha u naxariistee, Shaafi Raabi Kaahin oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta , waxa uuna xusay doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa isku xirnaanta ganacsatadeenna Soomaaliyeed iyo dhiirrigelinta maalgashiga dalka haatan hore usocdo
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Qaraxan argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa Dhibaatada Argigixisadu ay ku hayso Nolosha muwadiniinta Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeenna iyo guud ahaan dadkeenna.”
Madaxweynaha ayaa u rajeeyey Muwaadiniinta dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxan bahalnimada ah in uu Eebbe u boogo dhayo, waxa uuna xusay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan Ciribtirka cadawgan arxan laawaha ah, maantana la joogo xilligii loo midoobi lahaa in laga xoreeyo guud ahaan dalkeenna.
Maqaal horeMadaxweynaha JF oo si kulul uga hadlay qaraxii Kismaayo
Maqaal XigaMadaxweyne Koonfur Galbeed oo xalay qaabilay Siciid deni